Posted by ညီလင်းသစ် au 17.2.11
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အယ် အသက်က ၂၇နှစ်လာ
ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ် သေချာ လက်ညိုးလေးနဲ့
တခုချင်းထောက်ပြီး ရေတယ်နော် ... ၂၇ပဲတွေ့တယ်
မောင်မျိုးရေးထားတာတော့ ဂဏန်း ၂ လုံးပေါင်းရင် ၉ ရတယ်တဲ့။ ပို့စ်အဟောင်းတွေ မဖတ်ခင်ကတော့ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅ တခုခုပဲလို့ တွေးနေတာ။ အဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်လိုက်တော့ သိသွားပါပြီ။ သေချာအောင် လိုက်ရေကြည့်တော့ .... သေချာသွားတယ်။
မွေးနေ့မင်္ဂလာ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင် ...
လိမ္မာပါးနပ်သူတို့များ သွယ်ဝိုက်ပြီး လှလှလေးဖြစ်အောင် ပြောတတ်ပါ့နော်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် You are getting OLD!!! ဟား ဟား.., နောက်တာ။ :))
"မင်္ဂလာကျက်သရေရှိသော မွေးနေ့ပါ ကိုညီလင်းသစ်"
မှန်လိုက်လေဗျာ..၊ ကိတ်မုန့်တစ်ခုလုံးကို already offered to BT လို့ စာကပ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်..၊ :)
၂၇ ကစ,ပြီး ၄၅ မှာ ဆုံးတယ်..ဟုတ်လား? ၁၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းနှစ်လုံးကလည်း ၉ ဖြစ်တယ်လေ..း)၊ နောက်တာပါဗျာ၊ ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်နော်..၊
ပျောက်နေပါ့လား၊ လာအားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဟုတ်တယ်...ပြက္ခဒိန်တွေက ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် ဟောတစ်စောင်၊ ဟောတစ်စောင် နဲ့ ကုန်သွားကြတယ်...၊း)
အဲ့....ကျနော် မှန်းတဲ့ အသက်က မှားနေသေးတယ်လား သိတော့ပါဘူး လောသွားတာနဲ့း)
အစ်ကိုကတော့ ရက်စက်ပါ့ဗျာ မွေးနေ့ကိတ်မှာ ငရုတ်သိးကြီးနဲ့ဆိုတော့ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်သွားတယ် ။
ထပ်ဆုတောင်းပေးသွားတယ် အစ်ကိုရေ Happy Birthday ;)
ကိတ်မုန့်နဲ့ ငရုပ်သီးကို အခုလိုအတူတကွ မတွေ့ဘူးပါဘူး။
ခက်တာက ကြည့်ရင်းနဲ့ သီချင်းတွေသွားသတိရနေတာပဲ.. အကြိုက်ဆုံးသီချင်းက ကော်ဖီခါးခါး.. မကြိုက်ဆုံးက ငရုပ်သီးလိုမျိုး..း)
All the best ahead..
မွေးနေ့ပိုစ့်က ပျော်စရာ ပဟေဠိလေးနဲ့ပါလား ကိုညီလင်းသစ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖွယ် မင်္ဂလာမွေးနေ့ရက်လေး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
နေ့ရက်တိုင်း မင်္ဂလာရှိစွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေရှင်။
မိသားစုနဲ့အတူ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာ လောကကောင်းကျိုး မိမိကောင်းကျိုး နှစ်ဖြာအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့
စာကိုဆုံးဆောင်မဖတ်သေးပဲ ပထမဆုံးပုံကတည်းက သိသလိုလိုဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ရေကြည့်နေတာ ငရုတ်သီးနဲ့ ကော်ဖီဗူးကတော့ရေလို့ရတယ်။ လိမ္မော်သီကလည်းတဖက်ကကွယ်နေပေမယ့် ဒီဖက်က ၅မို့လို့ ဟိုဖက်လည်း ၅ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မှန်းတယ်။ တခုပဲ ဒီ TOBLERONE က ဘယ်နှစ်ဆစ်ပါလိမ့်လို့ ထင်နေတာ။ စားပေမယ့် အထစ်ကို မမှတ်မိဘူး။ တော်တော် အပင်ပန်းခံလိုက်တယ်။ နောက်မှ အောက်ကပုံတွေကို ဆက်ကြည့်မိတာ :)
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ ကိုညီလင်းသစ် ရေ..
ကိတ်မုန့်က မမြင်ဘူးသေးတဲ့ topping အသစ်နဲ့ပါလား :-) ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၁၈*၂ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ :D
ချစ်သောမိသားစုနဲ့အတူ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့သာယာသော နေ့တိုင်းရက်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့
၃၆ နှစ်ပြည့် ( ကော်ဖီဗူးလေးတွေက အစွန်းထွက် ၆ ရှိတယ်လေ ဟုတ်လားးp ) မွေးနေ့အမှတ်တရ အဖြစ် ။
ငြုတ်သီးတောင့် အနီကိုမှ ဘာလို့ ရွေးထည့်ထားလဲမသိဘူးနော် ...
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ မှနောင်မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာ
ချစ်သောသူတွေနဲ့ အတူတူ ဆင်နွဲနိုင်ပါစေ...
ကျမက သချာင်္မတော်လို့ မပေါင်းကြည့်တော့ပါဘူး။
အဟား..အသက်ကိုတွက်ကြည့်ရသေးတယ်။ ချော့ကလက်ကို တြိဂံတစ်တုံးချင်းစီတွက်မှ အဖြေမှန်ရတော့တယ်.. =)။ အသင့်စားလို့ရတဲ့ ချောကလက်နဲ့ လိမ္မော်သီး ဘဲယူသွားတော့မယ်..။
နောက်ဂဏန်းက ရှေ့ဂဏန်းရဲ့ နှစ်ဆလို့ ထင်ထားရင် တော့ ညီမှန်းထားတာ မမှားပါဘူး၊ ငရုတ်သီးက အကြောင်းရှိ တယ်ဗျ၊ လာမယ့်ပို့စ်မှာ ကျနော် ရှင်း ပြပါ့မယ်...၊း)
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ၊ ငရုတ်သီးနဲ့ ကိတ်မုန့်... အင်း,တခါ တခါတော့လည်း contrast လေးတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ....ဟုတ်တယ်ဟုတ်၊
'ငရုတ်သီးလိုမျိုး'ဆိုတာ ရာမရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းကိုများ ပြောချင်တာလားမသိ၊ ဒါဆိုရင်တော့ ခိုင်ခင်ဦး ကတဲ့ပုံ တောင် ကျနော်လည်း ပြန်မြင်လာမိတယ်..ဟားဟား၊ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..၊
လှပပြေပြစ်တဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ၊
အောက်ဆုံးက top view ပုံကိုတောင် မကြည့်ရသေးဘဲ နဲ့ အဖြေမှန်လုနီးပါး စဉ်းစားနိုင်တာ တယ်တော်ပါလား၊ လိုချင်တဲ့ ဂဏန်းရအောင် Toblerone ကို နှစ်ဆစ်တောင် ဖဲ့ထုတ်လိုက်ရတယ်၊း)
တော်တယ်ဗျို့..၊ :) ပရိုဖိုင်းလ်မှာ passionate about baking လို့ရေးထားတော့ ကျနော် bake မလုပ်တဲ့ cake က သိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်တော့ မထင်ဘူး..ဟားဟား၊
ကော်ဖီဗူးလေးတွေကို အစွန်းထွက် ၆ နဲ့ယူပြီး တွက်တဲ့ logical thinking က တယ်ဟုတ်ပါလား၊ ကျနော် အဲဒီထောင့်က မစဉ်းစားခဲ့ ဖူးဘူး၊ တော်တယ်ဗျာ..၊ အင်း, ငရုတ်သီးက ဘာလို့ပါနေတာလဲ ဆိုတာ လာမယ့် ပို့စ်မှာ ကျနော်ပြောပါ့မယ်၊ (ကဲ..အခုကတည်းက ကြော်ငြာ ဝင်ထားလိုက်ပြီ...အဟဲ)၊
မ,ရှင်လေးနဲ့ Thomas ...
ချစ်စရာ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးအတွက် တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...၊
တော်တယ်ညီရေ..၊ ချော့ကလက်ရယ်၊ လိမ္မော်သီးရယ် နဲ့ညီမျှတဲ့ အသက်ကိုလည်း အဲဒီလို ယူသွားလို့ရရင် ကောင်းမယ်..ဟားဟား၊ မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။
ဘယ်နှစ်နှစ်ပဲပြည့်ပါစေ.. မွေးနေ့တိုင်း စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပျော်ရွှင်စွာ.. ချစ်သောသူတွေနဲ့အတူ.. အရှည်အကြာ ဖြတ်သန်းရပါစေ..။
(တကယ်တော့ ပဟေဠိဖြေရတာ ပျင်းလို့...:D)
Dear Ko Nyi
May be late wish.
May u belong younger n younger age together with Ma Eaithu,Thuriya n another......:)
ကိုညီလင်းက ငယ်သေးတာပဲ...း))
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ချစ်သောသူများနဲ့ အတူတူ ချမ်းမြေ့စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
မွေးနေ့ ကိတ်မုန့်ကို ပြင်ထားတဲ့ idea လေး ကြိုက်တယ်... ကင်မရာ အစွမ်းကိုလဲ ကြိုက်တယ်လို့...
ပြီးတော့ Flickr မှာ အကောင့်ရှိရင် add ချင်ပါတယ်လို့...။
ကိုယ့်ထက်ငယ်သေးတာ သိရလို့ အားကျသွားတယ်၊
ငရုတ်သီးကို ကင်မရာအစွမ်းပြချင်လို့ ရိုက်တာ မှတ်တာ၊
နောက်ပိုစ့်မှ ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ စောင့်အုံးမှ၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရေ၊ အင်း..အမကိုတော့ ပဟေဠိတွေ လာ,လာမေးဦးမှနဲ့ တူတယ်...ဟားဟား၊
Thank you so much for your kind wish. It's so touching. :)
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ၊ ငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ အမကို ဒီလို ကိတ်မုန့်မျိုး တစ်ခုလုံး ပို့လိုက်ဦးမှ ပါပဲ၊ Flickr အကောင့် ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီအကောင့်က ဒီဘလော့ဂ်အတွက် သက်သက်ပဲဆိုတော့ အဲဒီမှာ ရှိသမျှ ပုံတွေက ဒီကဟာတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ၊ Add ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ nyilinnthit (http://www.flickr.com/photos/31440889@N04/) ပါပဲခင်ဗျား၊ ပရိုအကောင့်ဖွင့်ဖို့တော့ စဉ်းစားနေတုန်းပဲ၊
တနေရာ,ရာမှာတော့ ၁ ကျပျောက်ခဲ့ပုံ ရတယ်ဗျို့..၊ :D ဟုတ်ကဲ့..နောက်ပို့စ်လည်း လာဖတ်ပါဦး၊ အင်း..ကိတ်မုန့်ကတော့ သိပ်မဆိုးပါဘူး၊ ငရုတ်သီးကတော့ မစပ်ဘူးဗျ..၊း)
ကိုညီလင်းရေ... မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ ကိုညီလင်းရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် ချစ်သော မိသားစုနှင့် အတူ အမြဲ ထာဝရ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကုိုယ့်စီကနေ malware ကူးမှာစိုးလို့comment ပေးဘို့ တွန့် နေတာ။
ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ malware ကြောင့်နဲ့တော့ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါနဲ့၊ ကျနော်က အခု စစ်လည်းမစစ်၊ ဂရုလည်း မစိုက်တော့ ဘူး၊ ကွန်မန့်အားလုံးကိုလည်း ဖွင့်ထားလျက်ပါပဲဗျာ..။